အကယ်၍ သင်၏ Windows 10 ပျက်သွားလျှင် Kindle သည်အေးအေးဆေးဆေးရှိသည် eReaders အားလုံး
Joaquín Garcia က | | Amazon Kindle, စာဖတ်သူများ, Software များ
ရက်ပေါင်းများစွာသောကြောင့် Windows ကို 10 နှစ်မြောက် Update ကို ၎င်း၏အသုံးပြုသူများကိုမကောင်းတဲ့လှည့်ကွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ ဦး စွာ webcams တွင်ပြသနာများရှိခဲ့သည်၊ ထို့နောက်၎င်းသည် Kobo eReaders နှင့် derivatives များနှင့်ယခုပြwithနာသည် Kindle ဖြစ်သည်။
Windows 10 Anniversary Update သည် Kindle eReaders နှင့်အပြည့်အဝကိုက်ညီမှုရှိသည်ဟုထင်ရသော်လည်း Windows 10 နှစ်ပတ်လည်အပြီးအပြီးတွင်လုံခြုံမှုရှိသည်ဟုထင်ရသော်လည်းအမှန်မှာ၊ Kindle သည် Windows 10 Anniversary Update နှင့်မကိုက်ညီပါ.
သုံးစွဲသူများစွာက Windows 10 Anniversary Update မှ၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာများကို update လုပ်ပြီးတဲ့အခါ၊ သင်၏ Kindle ကိုဆက်သွယ်ခြင်းသည်ကျော်ကြားသောအပြာရောင်မျက်နှာပြင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူတို့ကပြproblemနာကုဒ်ကိုသတိထားမိပြီးကွန်ပျူတာကိုပြန်ဖွင့်ပြီးနောက်အပြာမျက်နှာပြင်ထပ်ခါထပ်ခါပေါ်လာလိမ့်မည်။ လူတိုင်းက Kindle နှင့် Windows 10 Anniversary Update ကြားဆက်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးလူတိုင်းအပြစ်တင်ကြသည်။ သို့သော်မည်သူမျှဖြေရှင်းနည်းရှိသည်ဟုမထင်ရသော်လည်းအနည်းဆုံး Microsoft ကဘာမှမပြောပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle ကိုဆက်သွယ်ပြီးနောက်တွင်ထင်ရှားသောအပြာရောင်မျက်နှာပြင်သည် Windows 10 သို့ပြန်သွားသည်
ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ Kobo eReaders နှင့်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းပေးရန် Microsoft ကပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည် ဤအချက်ကြောင့် Kindle သည်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို Microsoft သည်လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းပြtheနာကိုဖြေရှင်းရန် update ကိုထုတ်ပြန်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
သို့သော်၊ Microsoft သည် eReaders သို့မဟုတ် webcams ကဲ့သို့သောအခြေခံဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူတင်ပြနေသည့်ပြproblemsနာများကြောင့်သာမကဘဲ၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့သောပြproblemနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း.
အကယ်၍ လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အရာအားလုံးကိုပြုပြင်တည့်မတ်ပေးသော patch ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည် ဘယ်ပြnewနာအသစ်ပေါ်လာမလဲ။ ရှင်းနေသည်မှာ Windows 10 အသုံးပြုသူများသည်လိုအပ်သည် အရာအားလုံးတည်ငြိမ်စေရန် Windows 10 Anniversary Update သို့မကြာမီအနည်းငယ်စောင့်ပါအသုံးပြုသူသည်မိမိ eReader ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်စေလိုသရွေ့၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » အကယ်၍ သင်၏ Windows 10 ပျက်သွားပါကသင်၏ Kindle သည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သည်